Fitaovana fanamafisana rod Rod amin'ny fitrandrahana fanentanana fanadinoana
Home / Applications / Induction Forging / Famaranana fametahana vy vy
Sokajy: Induction Forging Tags: manadino ny famaranana vy, manadino basy vy, fanadinoana vy, fanagadrana famaranana vy, fanagadrana fanadinoana famaranana vy, RF manadino tsorakazo
Induction Fandrindrana Steel Rod Endy amin'ny induction Heating Machine
Tanjona Hafanaina ny faran'ny vy vy hatramin'ny 1800ºF alohan'ny asa fisandohana. Ny fanodinana ny tsorakazo dia misy ny fanafanana, ny fanindriana amin'ny ampahany roa ho faty hanodinana ny faran'ny tsorakazo, ary ny fanafanana farany ao anaty vilan-tsiranoka iray hampanginana ny tsorakazo sy hanamaivanana ireo adin-tsolika. Ny mpanjifa dia mila manamboatra tsorakazo hafa
savaivony eo anelanelan'ny 1/8 ″ sy 1/2 ″. Ny maripanan'ny tsorakazo dia tsy maintsy mihoatra ny 1400ºF eo afovoany raha ny haavon'ny ivelany kosa dia mety hahatratra 1900ºF.
Fitaovana vy misy savaivony samihafa avy amin'ny 1/8 ″ ka hatramin'ny 1/2 ″
Fitaovana DW-HF-45kW famoahana herinaratra fampidirana fanjakana miorina ao anatin'izany ny tobin-tsolika lavitra misy kapasera 2 mitotaly 0.5 μF, miaraka amina coil type hélique 6 (3 mahery 3).
Fomba fizarana Ny famatsian-kery fampidiran-ketra mafy DW-HF-45kW dia hita mba hahatratrarana ireto valiny manaraka ireto:
Valiny • Nahatratra 1800F tao anatin'ny 5 segondra latsaka ny tsipika vy misy savaivony raha refesina pyrométer optika.
• Ny tsorakazo 1/2 ″ dia noferan'ireo fananana ara-batana tamin'ny vy niaraka tamin'ny fotoana ilaina hamindrana ny hafanana avy eo amin'ny sisin'ny vavahady mankany amin'ny foibe hampiakarana ny mari-pana hatramin'ny 1400ºF nefa tsy atsonika ny velaran'ny bar. Ny hafanana tehina 1/8 was dia voafetra tamin'ny alàlan'ny hafanana fampidirana ao amin'ny 80 kHz. Ny bara savaivony lehibe kokoa dia mihamafana haingana kokoa hatrany amin'ny famerana ny fitondran-tena.